 " ကိုယ်တို့အကြောင်း
ကြိုဆိုပါတယ် သင့်ရဲ့ဤနေရာတွင်လာရောက်လည်ပတ်! SeabreezeRFID တရုတ်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် 2003 စမတ်ကဒ်၏စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ & RFID စီးပွားရေးလုပ်ငန်း. ကျွန်တော်တို့ဌာနချုပ်ရှန်ကျန်းတွင်တည်ရှိသည်. ကျနော်တို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူအလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်အထူးကုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်.
စိတ်အားထက်သန်မှု၏ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အဆောက်အအုံ, ထူးချွန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ, SeabreezeRFID ယခုတစ်ခုလုံးကိုစမတ်ကဒ်ဖုံးလွှမ်း & RFID & IoT ထုတ်ကုန်ရောင်းချမှု, Value-added ဖြေရှင်းချက်.
SeabreezeRFID နှစ်ဦးစလုံးက high-quality ၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကျွမ်းကျင်မှုကမ်းလှမ်း, တန်ဖိုးနည်းထုတ်ကုန်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် software ကိုဖြေရှင်းနည်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှု.
ဆောင်ပုဒ် "Smart ပလက်ဖောင်း Creating" နဲ့, SeabreezeRFID တရုတ်နှင့်တရုတ်မိတ်ဖက်ရှာထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမသာတစ်စမတ်ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်!
•ပလတ်စတစ် / စမတ်ကဒ်အတွက် System Integration & RFID လယ်ပြင်
•ပလတ်စတစ် / စမတ်ကဒ်ထုတ်လုပ်သူများ
•ထုတ်လုပ်သူများနှင့် IoT လယ်ပြင်၌ Integrated နဲ့ End အသုံးပြုသူများ
• Channel ကိုကုန်သည်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးကို-added မိတ်ဖက်
စမတ်ကဒ်: RFID IC / ID ကိုကတ်, စမတ်ကဒ်, ပလပ်စတစ်ကဒ်, သံလိုက် Card ကို, ချိတ်ဆက်မှု IC ကဒ်, ဆက်သွယ်ရန် IC ကဒ်, စမတ်ကဒ်, JAVA ကဒ်, CPU ကိုကဒ်, LF ကဒ်, HF ကဒ်, Dual-interface ကိုကဒ်, dual အကြိမ်ရေကဒ်, high-grade ကိုကဒ်, VIP ကဒ်, အသင်းဝင်ကဒ်, ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္ဍာန်ကဒ်, PVC ကဒ်, LF ပါဝင်သည်, HF, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF.
RFID Tag ကို / စတစ်ကာ: RFID အင်းလေး, RFID စွဲအင်းလေး, RFID စွဲအင်တင်နာ, RFID အင်းလေး Card ကို, RFID အင်းလေး Tag ကို, NFC ကို tag ကို, စတစ်ကာစက္ကူ Tag ကို, RFID တံဆိပ်တပ်ရန်, RFID လက်မှတ်, E-လက်မှတ်, RFID အဝတ်အစား Tag ကို, anti-အတုစက္ကူ Tag ကို, crystal Epoxy Tag ကို, အကြွေစေ့ Tag ကို, RFID တိရိစ္ဆာန် Tag ကို, RFID အဝတ်လျှော် Tag ကို, RFID Anti-သတ္တု, EAS + RFID Anti-ခိုးယူ Tag ကို.
RFID Keychain / လက်ပတ်: RFID Keychain, သော့ကွင်း, Key ကို fobs, NFC ကိုဖျ Silicon လက်ပတ်, TM အလိုအလျောက်ကဒ်လက်ကိုင်, RFID နိုင်လွန်ခညျြနှောငျလက်ပတ်, အထည်အလိပ် elasticity Stretch လက်ပတ်, RFID လူနာသတ်မှတ်ခြင်းလက်ပတ်, ကလေးလက်ပတ်, ခရီးသွားဧည့်လက်ပတ်, RFID ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ID ကိုလက်ပတ်, Tyvek လက်ပတ်.
RFID Read / Write ပစ္စည်း, IoT Hardwave: RFID Read / Write device ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Read / Write စက်ပစ္စည်း, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာတစ်ခု, သံလိုက် Stripe ဟာကတ် Reader ကို, Password ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Copy ကူးစက်, R / W ကို module တစ်ခု, Reader ကိုအင်တင်နာ, 2.45GHz အမြန်နှုန်း Active ကိုထုတ်ကုန်များ.
RFID / IoT ဖြေရှင်းချက်: လျှောက်လွှာဆော့ဖျဝဲဖှံ့ဖွိုးတိုးတ, လျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ.